DoGooder.tv: Vohikala Fizaràna Lahatsary ho an’ireo Tsy Mikatsaka Tombontsoa Manokana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Febroary 2019 18:32 GMT
Nanaiky nitafatafa tamiko tamim-pahatsorana ny Tale Jeneralin'ny See3 sady mpamorona ny DoGooderTV, Michael Hoffman, ary araka ny filazany manokana, izao no ataon-dry zareo:
Tetikasan'ny See3 Communications ny DoGooderTV. Ny ataon'ny See3 dia ny manampy ireo fikambanana tsy mikatsaka tombontsoa manokana hilaza ny tantarany ao anaty aterineto. Mampiasa indrindra ny lahatsary sy ny tambajotran-tseraseram-bahoaka ary vohikala izahay hizarana ireo tantara ireo. Manampy ireo mpanjifanay amin'ny alàlan'ireo fitaovana efa misy izahay, toy ny YouTube sy ireo vohikala fizarana lahatsary ary ireo tambajotram-piarahamonina am-polony hafa. Tsy nitsahatra niteny taminay ny sasany tamin'ireo mpanjifa fa nanana olana tamin'ireo vohikala ireo. Tsy naninona izy ireo, fa kosa nanahy momba ny fanarahamaso ny mari-pamantarana azy, sy ny fifanarahan'ny mpijery sy ny manodidina amin'ny hafatra voiziny.
Noho izany dia nanapa-kevitra ny hamorona ny DoGooder.tv ry zareo, izay ahafahan'ireo mpanjifa mametaka ny lahatsariny aminà sokajina mpijery iray voafantina izay liana hamadika izao tontolo izao ho toerana tsara kokoa. Ny hevitra amin'izany dia ny ahitan'izay rehetra liana amin'ireo fikambanana tsy mikatsaka tombontsoa manokana, sy ny asa vitan-dry zareo, ireo lahatsary ao amin'ny DoGooderTV ary ahafahan'izy ireo mamaky bebe kokoa momba ireo fikambanana ireo sy ny fotokevitra arovany, maka fahalalàna momba ny firotsahana an-tsitrapo sy ireo hetsika fanomezana fanampiana, mamorona vondrompiarahamonina manodidina ireo olana mahaliana azy ary mizara ny traikefany sy ny ezaka nataony miaraka amin'ireo olona mitovy fisainana aminy.
Mitombo isan'andro ny DoGooder.tv, satria mihamaro ireo fikambanana tsy mikatsaka tombontsoa manokana manerana izao tontolo izao no miditra ho mpikambana anatin'io vohikala io, mampiakatra ny lahatsariny. Avy amin'ny alàlan'ny teny miampita, na koa ireo lahatsoratra voavaky anaty vohikala hafa manonona azy ireo, no nahafantaran'ny olona ny DoGooderTV, ary maro amin'izy ireny no nandray anjara, voasariky ny fifaninanana Lahatsary Isan-taona karakarainy. Ny lohahevitry ny fifaninanana amin'ity taona ity dia ny: Avy any Ifotony: Fampiasàna ny Teknolojia Hampandraisana Andraikitra ireo Mpifidy ary Hanaovana izao Tontolo izao ho Toerana Tsara Kokoa. Nivondrona ny Nten (ilay Tambajotran'ny Teknolojia tsy Mikatsaka Tombontsoa Manokana) sy ny See3 mba hanasàna izay fikambanana mpandresy mandefa ny sarimiaina, lahatsary na mashup tsara indrindra ao amin'ny DoGooder.tv mba hampandraisana andraikitra ireo mpifidy, hanatrika ny Valandresaka amin'ny 2009 momba ny Teknolojia tsy Mikatsaka Tombontsoa Manokana, iantohan-dry zareo ny fandaniana rehetra. ity lahatsary manaraka ity no nandresy tamin'ny herintaona: ny lahatsarin'ny fikambanana Avaaz izay maharitra 2:31 minitra, “Atsaharo ny Fifandonan'ny Sivilizasiona”, antso ho an'ny fandriampahalemana sy ny fandraisana fepetra any Afovoany Atsinanana.
Araka izany raha toa ianao ka fikambanana tsy mitaky tombontsoa manokana liana ampahafantatra ny olona izay ataonao, na mpijery maniry ny hahita ireo ezaka ataon'ny hafa hanovàna tsikelikely izao tontolo izao ary te hahafantatra izay azonao atao hanampiana azy ireo, fiatoana tsara eny antsefatsefan-dàlana eny ny DogooderTV.